Allgedo.com » 2013 » February » 21
Home » Archive Daily February 21st, 2013
Japan oo Safiir usoo Magacawday Soomaaliya
(Muqdisho, Soomaaliya (AOL) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Villa Soomaaliya ku qaabilay Safiirka cusub ay dowladda Japan u soo magaacwday Soomaaliya. Kadib markii uu ka gudoomay waraqadaha shaqadda ayuu Madaxweynaha sheegay in dowladda Japan ay ka mid tahay dowladdaha Soomaaliya toos ula xariira. Japan ayaa waxaa ay Soomaaliya...
Xubno ka tirsan Guddiga Maamul u sameynta Jubbooyinka iyo mas’uuliyiin kale oo maanta ka degay Garbahaarey
Garbahaarey, Somalia (AOL) – Magaala madaxda gobolka Gedo ee Garbahaarey waxaa maanta ka degay qaar ka mid ah Guddiga maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka oo beryahaanba ku sugnaa degmada Doolow oo ay wehliyaan Gudoomiye yaasha degmooyinka Luuq, Doolow iyo Balad-xaawo. Xubnahaan ayaa markii ay tageen Garbahaarey waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka, saraakiil iyo qeybaha kala...
Madaxweynaha Soomaaliya oo la Kulmay Madaxa Hay,adda USAID oo soo Gaarey Muqdisho
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxa Hay’adda USAID ee gargaarka dalka Mareykanka Dr Rajif Shah iyo xubno ka tirsan hay’addaasi. Markii uu kasoo dagay Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay halkaasi kulan kuwada qaateen Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Kulanka oo ay saxaafada banaanka ka taagneed ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa...
Dad lagu laayey Masjid ku yaala Magaalada Libooyo Kenya
Sida ay sheegeen masuuliyiin ka tirsan dalka Kenya, koox hubeysan ayaa rasaas ku furay goob Masaajid ah Bariga Kenya, waxaana ay ku dileen 7 qof. Wararka qaar ayaa sheegaya in dadkaani isugu jireen 5 nin iyo labo Haween ah kuwaas oo lagu diley guryahooda xili ay isu diyaarinyeen Salaadii subax Macalim Maxamed oo laga soo doorto magaalada Gaarisa ayaa yiri maanta oo Khamiis ah ayaa koox...
Maxkamada Ciidamada oo Xukuno Dil ku Fulisey Askar ka tirsanaa Ciidamada Soomaaliya
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Dowladda Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay askar ka tirsan ciidamada xooga dalka Soomaaliya. Dilka askartaan ayaa wuxuu ka dhacay barxada iskuul Polisio ee Magaalada Muqdisho halkaasi oo meel fagaare ah lagu toogtay. Askarta la toogtay ayaa waxa ay gaarayeen ilaa saddex kuwaasi oo maxkamada ciidamada qalabka sida ay ku heshay falal ah dil inay geysteen. Guddoomiyaha...
Dowlada Ugandha oo Sheegtay Muqdisho in ay ka Furaneyso Safaarad
Qorshahan ay doonayso in Uganda in Muqdisho ka furato Safaaradeeda ee Soomaaliya ayaa lagu micneeyay in qeyb ay ka tahay horumarka iyo ifafaalaha Nabadeed ee la dareemayo, iyadoo dhanka kale Uganda ay tibaaxday in wadanka Soomaaliya oo dagaalo ay aafeeyeen haatan uu u muuqdo mid soo kabsanaya. Waxaana sidoo kale sheegeen in shabaab oo inta badan ka ariminayay gobolada iyo bartamaha Soomaaliya haatan...
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta gegida diyaaradaha ee Muqdisho ka celisay diyaarad u socotay degmada Doolow Soomaaliya, si ay halkaas uga soo qaado xubno isugu jiray guddoomiye-yaasha saddexda Degmo ee Luuq, Doolow iyo Balad-xaawo, iyo qaar ka mid ah Guddiga maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka oo doonayay in ay magaala madaxda gobolka Gedo ee Garbahaarey uga qeyb galaan kulan wada tashi...
Ra’iisul wasaare kuxigeenka Ahna Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalamiga Marwo Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo maanta dib ugu soo laabatay Magaalada Muqdisho kadib markii Magaalada New York ay uga qeybgashay 14-kii bishan February kulan golaha ammaanka ee Qaramada midoobey uu kaga dooday ajandayaal ku saabsan arrimaha wadanka Soomaaliya. Shir jaraa’id oo ay ku qabatay Airport-ka...
Ururka Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalo ka dhacay Gobalka Shabelaha hoose oo ay sheegeen inay la galeen ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Sida uu warbaahinta usheegay afhayeenka dhanka dagaalada ee Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab dagaalka ka dhacay deegaanka Janaale ee Gobalka Shabeelaha hoose ayaa waxaa ku gacan sareeya Al-Shabaab. Wuxuu sheegay in weerar culus ay ka...